GOG.com na-alaghachi na mgbọrọgwụ ya na ọba akwụkwọ 'jiri nlezianya họrọ' nke egwuregwu DRM - 【 Comparison】 2022
GOG.com na-alaghachi na mgbọrọgwụ ya site na ọbá akwụkwọ 'jiri nlezianya chịkọta' nke egwuregwu na-enweghị DRM
Kincown [ ogologo aka na GOG Clip maka nri, Scoop maka nwamba, scoop maka nri maka ...
Anyị mụtara na GOG.com na-atụfu ego ma kpebie ịgbanwe usoro ya, na-alaghachi na mgbọrọgwụ ya.
Ụlọ ahịa dijitalụ, nke CD Projekt nwere, na-ewe ụzọ dị iche site n'ịlaghachi na nkà ihe ọmụma mbụ ya nke ilekwasị anya na obere nhọrọ nke egwuregwu PC nke na-adịghị egbochi ya site na ngwa DRM ọ bụla.
Dị ka Verge si kwuo, CD Projekt CFO Piotr Nielubowicz kwuru, sị: "Mgbe a bịara na GOG, arụmọrụ ya na-esiri ike, na nso nso a anyị emeela ihe iji meziwanye ọnọdụ ego ya.
"Nke mbụ, anyị kpebiri na GOG kwesịrị itinyekwu uche na azụmahịa ya. Nielubowicz kọwara, sị: “Nke pụtara inye nhọrọ egwuregwu nke ọma ahọrọ nke nwere nkà ihe ọmụma ha pụrụ iche na-enweghị DRM. Dị ka usoro a si dị, a ga-enwe mgbanwe na nhazi nke otu.
Rịba ama na ụfọdụ ndị mmepe ga-ewepụ na ọrụ GOG.com na-esote akụkọ banyere mfu nke ihe dị ka nde € 1,14 (gburugburu € 850,000 ma ọ bụ AU € 1,6 nde) na nsonaazụ ego ọhụrụ ha (ọ bụ ezie na ngbanwe n'ozuzu mụbara ntakịrị).
Nyocha: Laghachi azụ n'oge ochie?
GOG.com na-apụ na atụmatụ ya karịrị akarị nke na-achọ ịsọ mpi egwuregwu egwuregwu PC dị n'ịntanetị bụ Steam na Epic Games, ma na-elekwasị anya n'ihe mere ka ọ bụrụ ewu ewu na mbụ.
Ndị a bụ egwuregwu na-enweghị DRM, n'ezie - DRM ka na-adọta iwe nke ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu - na oge ochie PC na-agba ọsọ (cheta GOG na-anọchi anya "Ezigbo Egwuregwu Ochie") nke a na-emegharị ka ọ na-agba ọsọ na PC nke oge a. , n'olileanya nke ịzere nkụda mmụọ ọ bụla nwere ike ime n'ụdị nsogbu ndị nwere ike ibilite na aha ochie na ihe ọhụrụ. N'oge na-adịbeghị anya, anyị ahụla GOG.com na-enye aha Star Trek kpochapụwo dị ka 2002's Bridge Commander (gụnyere patch v1.1).
N'ozuzu, atụmatụ ọhụrụ a na-anọchite anya mmegharị a ga-ekwe nghọta, na n'ezie, GOG.com na-ata ahụhụ mgbe niile na mgbalị iji soro ụmụ nwoke ukwu na-asọmpi, karịsịa mgbe Epic na-arụsi ọrụ ike na-atụfu ego zuru oke. (Fortnite) na nnukwu egwuregwu dị ka onyinye iji dọta ndị ọrụ ọhụrụ.
Olileanya, GOG.com nwere ike ịmaliteghachi onwe ya niche nke bara uru maka onwe ya na egwuregwu egwuregwu PC, n'ihi na anyị, na ọtụtụ ndị ọzọ, chọrọ ka ọ nọrọ.
Taa Kasị Mma Cha Cha PC Deals